Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Chelsea Oo Dib Ugu Soo Laabatay Jules Kounde, Kylian Mbappe Oo Ogaaday Mushaharka Real Madrid, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Chelsea oo dib ugu soo laabatay Jules Kounde, Kylian Mbappe oo ogaaday mushaharka Real Madrid, iyo Qodobo kale
Da’yarka xulka England ee Jude Bellingham ayaa qishay inuu ku biiri karo Liiverpool mustaqbalka xilli uu Jurgen Klopp doonayo inuu weerar ku qaado kooxdiisii hore ee Borussia Dortmund. (Star)
Liverpool ayuu sidoo kale u sheegay agaasimaha ciyaaraha kooxda Genk inay la saxeexdaan weeraryahanka kooxdaas ee Paul Onuachu. (Mirror)
Liverpool ayaa sidoo kale Barcelona iyo Bayern Munich kula tartamaysa saxeexa 18 sano jirka RB Salzburg ee Karim Adeyemi oo lix gool kusoo dhaliyay lix gool xilli ciyaareedkan. (Bild, via Mirror)
Real Madrid ayaa heshiis uu mushahar ahaan 30 Milyan oo euro sanadkii ku qaadan doono u bandhigaysa Kylian Mbappe haddii uu qaab xor ah ugaga yimaado PSG xagaaga dambe. (Fichajes – in Spanish)
Chelsea ayaa sii wadi doonta indho-indhaynta Jules Kounde oo Sevilla ka tirsan si ay bisha January ugu dhaqaaqaan saxeexiisa kaddib markii ay xagaagan waayeen. (Evening Standard)
Chelsea ayaa sidoo kale xagaaga dambe u dhaqaaqi karta 21 sano jirka khadka dhexe ee kooxda Monaco ee Aurelien Tchouameni oo ay xagaagan doonayeen balse ay u arkeen inuu xilli ciyaareed kale khibrad soo helo. (The Athletic – subscription required)
Juventus ayaa sidoo kale la sheegayaa inay xiisaynayso Aurelien Tchouameni. (Calciomercato via Sportsmole)
Manchester City ayaa xagaagan seegtay saxeexa Wesley Ribeiro Silva kaddib markii ay 6.5 Milyan oo pound oo ay dalab ka gudbiyeen ay soo diiday kooxdiisa Palmeiras. (Marca, via HITC)
Arsenal ayaa diiday dalab ay kooxda Galatasaraay ka gudbisay khadkeeda dhexe ee Mohamed Elneny. (Sky Sports)
Real Madrid khadkeeda dhexe ee Marco Asensio ayaa diiday fursad uu AC Milan iyo Tottenham ugu biiri karayay xagaagii. (Marca)
Manchester United ayaa si cad u qorshaysatay inay xagaaga dambe u dhaqaaqdo saxeexa Declan Rice oo West Ham ka tirsan xilli Chelsea oo lala xidhiidhinayay ay dookhyo kale raadinayso. (Mirror)
Fashilkii Liverpool ee inay xilli hore oo xagaaga ah iibiso Xherdan Shaqiri amaba weeraryahan Origi ayaa sababay inay awoodi waayeen inay weeraryahan Patson Daka kala soo wareegaan RB Salzburg kahor intii uusan Leicester City ku biirin. (Here We Go Podcast, via Express)
Arsenal daafaceeda la ilaaway ee Konstantinos Mavropanos ayaa si rasmi ah ugu biiri kara kooxda uu amaahda kula joogo ee Stuttgart. (Bild, via Star)
Real Madrid ayaa diyaar u ah inaysan suuqa January sii daynin khadkeeda dhexe ee Dani Ceballos oo kasoo laabtay laba sano oo amaah ah isla markaana ay haatan saxeexiisa doonayso kooxdiisii hore ee Real Betis. (Defensacentral – in Spanish)
Khadka dhexe ee kooxda Papy Mendy ayaa heshiis amaah ah oo xilli dambe ah kaga bixi kara Leicester City isaga oo ku biiraya kooxda Turkey-ga ah ee Galatasaraay. (Leicester Mercury)